Dhalasho Wacan Amitabh Bachchan Iyo 15 Jeer Muuqaal Ahaan Bollywoodka Kaga Yaabsaday (+Sawiro) – Filimside.net
Dhalasho Wacan Amitabh Bachchan Iyo 15 Jeer Muuqaal Ahaan Bollywoodka Kaga Yaabsaday (+Sawiro)
Aamir Khan oo Amitabh Bachchan Thugs of Hindostan la sameenayo waxuu yiri,”waa wax aad u dhib badan in dib loo abuuro ama la sameeyo qaab jiliinka Amitabh Bachchan oo kale macquul ma ahan Super Star Big B oo kale inaan helno Style-kisa iyo jiliinkisa waa mid qofna sameen Karin.”
Taasi been ma ahan Aamir waa qabiir weyn si wanaagsana u tilmaamay maqaamka uu ku leeyahay Mega Star Amitabh Bachchan fanka iyo heerka uu jiliinka ka gaaray waana jilaaga lagu tilmaamay midka ay ku aftirsadaan Bollywoodka.
Waxuu maanta u dabaal dagayaa Amitabh Bachchan sanad guuradisa dhalasho isagoo dhashtay maanta oo kale 11 October sanadkii 1942 waxuuna maanta si rasmi ah u jirsaday 76 sano balse da’diisa iyo shaqadiisa ismalahan.
Amitabh caalamka waxaa looga yaqaana ninka kaliya ee India laga aqoonsanyahay ama hogaamiyaha India ugu magaca weyn sida jaceylka waalida ah ee loo aqaaday bari samaadkii aawged waana sababta uu u leeyahay Aamir macquul m a ahan in maqaamkisa oo kale la gaaro.
Hadaba waxaan idiin heynaa 15 muuqaal kala duwan oo xidigaan kusoo bandhigay aflaamta ilaa filmkiisa u dambeyay Thugs of Hindostan ilaa aflaamo badan oo kala duwan halkaan hoose ka daawo sida doorarkiisa muuqaal ahaan marar badan uu isku bedelaayey.
Eklavya-The Royal Guard:
Waxaa Aqrisay 550